आफ्नो प्रतिभालाई चिन्नुहोस्, सबैकुरा हुन्छ - रेखा थापा -
आफ्नो प्रतिभालाई चिन्नुहोस्, सबैकुरा हुन्छ – रेखा थापा
७ चैत्र २०७२, आईतवार २३:२५ March 20, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on आफ्नो प्रतिभालाई चिन्नुहोस्, सबैकुरा हुन्छ – रेखा थापा
रेखा थापाको चलचित्र रामप्यारी यही चैत २६ गते देशैभर प्रर्दशन हुँदैछ । उनी आफै मुख्य भुमिकामा रहेको चलचित्रमा उनले आफ्नै दिदीका छोरा आभाषलाई हिरोमा ब्रेक दिएका छन् । रेखाले चैत २६ मा रामप्यारी हलमा लगाउने भएपछि, छवि ओझाले आफ्नो फिल्म किस्मत २ को रिलिज डेट सारेका छन् । रेखाले यसअघि बनाएका चलचित्र काली, हिम्मतवाली हिट भएका थिए । यसपाली उनले आफ्नो चलचित्रमा ट्याम्पु ड्राईभर महिलाको कथा उठाएकी छिन् । उनै रेखासँग गरिएको कुराकानी तल पढ्नुहोस्
रेखाले जे गरे पनि समाचार बन्छ, किन होला ? पछिल्लोपटक, जीवनसँगको फोटोले पनि चर्चा पायो ।
हाम्रो संस्कार चैँ नमस्कार नै हो । अंगालो मार्ने भनेको फरक बिषय भयो । एउटा ठूलो मानिसले साना मानिसलाई ढाडस दिएर अंगालो मारिन्छ । मैले आफुले आफुलाई ठूलो मान्छे भनेको त होईन । एउटा सत्य बाटोमा हिडेको मानिस, जो कर्मशिल छ उनलाई परबाट नियाल्ने धेरै मानिसहरु हुँदा रहेछन् । मैले गरेका साना – साना कुराहरु पनि समाचार बन्छन् । मलाई यसले कुनै अशर गर्दैन । म खुल्ला किताब हुँ । सबैले पढ्नु तर अक्षर चैँ गढबढ गरेर पढ्न पाईँदैन । पूरा वाक्य पढ्नुहोला ।
सँधै यस्ता समाचार आइरहँदा तनाब हुँदैन ?
म एकदम सकारात्मक सोच्ने मान्छे हुँ । मैले नगर्नुपर्ने काम गरेको छु, भने त्यो महशुस हुन्छ । तर, मैले जिन्दगीमा कहिले पनि त्यस्तो ठूलो गल्ती गरेको छैन । यो गसिप आउँछन् नी , त्यस्ताले नी मलाई केही अशर गर्दैन । चरित्र हत्या गर्न खोज्नुभयो भने चैँ चित्त दुख्छ । तर, मलाई पत्रकारले अहिलेसम्म त्यसरी प्रश्न सोध्नुभएको छैन । पत्रकारहरुबाट नी कहिलेकाहीँ ह्रस्व दीर्घ बिग्रन सक्छ नी त । आत्मामा ठेस पुग्ने खालका समाचार आउँदा चैँ कहिलेकाहीँ म त्यस्तो रुपमा प्रस्तुत हुने हो ।
अभिनय, निर्देशन , गायन , राजनीति सबैतिर हात हालनुभएको छ ?
मेरो भावना निस्केको हो । म जे छु, त्यही चिज नै प्रष्फुटन हुने हो नी त । मलाई सबैकुरा गर्न आउँछ । मैले सिकेको छैन । हरेक व्यक्तिभित्र कला हुन्छ । त्यसलाई चिन्न सक्नुपर्छ । भगवानले मलाई मात्र दिएर पठाएको छैन । मैले पनि त्यही सूर्यको प्रकाश, त्यही हावा लिने हो । भगवानले कसैलाई अन्याय गरेर पठाएको छैन । आफ्नो प्रतिभालाई चिन्नुहोस्, सबैकुरा हुन्छ ।
तपाईलाई कहिलेकाहीँ चर्को बोलेको आरोप पनि लाग्छ नी ?
चर्को बोल्ने मान्छे नै राम्रो हुन्छ । ओखर फुटाएर खाए जस्तो हो । ओखर बाहिर कति साह्रो हुन्छ, फुटाएर खाए कति मीठो हुन्छ । हो, म त्यस्तै छु । कोशीको पानी खाएर होला , म चलाख छु । प्रतिभावान छु । म फिल्ममा डायलगहरु पनि बनाउँछु ।
बर्षै पिच्छे सिनेमा हिट हुन्छ ? लगानी के मा हुन्छ ?
पैसा मेरा लागि महत्वपूर्ण होईन । म जम्मा गर्दिन । त्यसबाट, अर्को फिल्म बनाईहाल्छु । यो फिल्म बनाउने पैसा ममी अथवा बुवाले दिनुभएको होईन । सबै जनताले दिनुभएको हो । मेरो फिल्मको लगानी सबै जनताले गर्नुभएको हो । त्यसैले म लगानी उठ्नेबित्तिकै अर्को फिल्म बनाउँछु ।
रामप्यारीको मुख्य बिषयका बारेमा फेरी बताईदिनुहोस् न ?
हामी ३३ प्रतिशत आरक्षणमा चित्त बुझाईरहेका छौँ । मेरो बिचारमा आफ्नो क्षमताअनुशारको काम गर्नुपर्यो, महिलाहरुले । पश्चिमेली शैली अपनाएर मात्रै महिलाले समान अधिकार पाउँदैनन् । त्यो पश्चिमेली शैली अपनाएर मात्रै हुन्न । विकासका शैली पनि अपनाउनुपर्यो नी । समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपर्यो । मैले रामप्यारीमा यी कुराहरु उठाएको छु ।
तपाई नेता बन्ने खवरहरु खुव आए, अहिले त्यो कुरा के हुँदैछ ?
हो, मैले चुनावका लागि टिकट पनि पाएको थिएँ । म अहिले अध्ययन नै गरिराछु । राजनीतिमा मानिसहरु किन फ्लप हुन्छन् ? म जान्छु भने, पुराना व्यक्ति जस्तै फ्लप हुन जान्न । त्यसैले म अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छु । राजनीतिमा ती पुराना व्यक्तिहरु जस्तै फ्लप नै हुन त किन जाने ?
राजनीतिमा ब्याप्त कुसंस्कारका बारेमा चाँही फिल्म नबनाउने ?
जगजाहेर छ नी उहाँहरुका कुरा त । त्यस बिषयमा नबनाउने । तर, अन्य फिल्ममार्फत पनि त मैले नेताहरुले गरेको कुकर्मका बारेमा कुरा उठाईरहेकी छु नी । म सामान्य व्यक्तिहरुको बिषयमा फिल्म बनाउनमै रुची राख्छु ।
यसपाली त आफ्नै छोरा लिनुभयो हिरो ?
पहिलादेखि नै आभाष अधिकारीलाई किन हिरो नबनाएको भन्थे मानिसहरु । मेरो दिदीको छोरा हो आभाष । ऊ आफैँ फोटोग्राफी पढेको केटा हो । नाटक पनि गर्छ । घरभित्रै पनि सुन रहेछ भन्ने थाहा पाएको थिईन । २०–२१ बर्ष को भयो ऊ । हिरो बन्ने उमेर नी पुग्यो भनेर मैले ब्रेक दिएको हुँ ।
रेखा थापाले ल्याउने सबै हिरोहरु हिट हुन्छन् ? रेखा थापा नयाँ हिरोका लागि फाप्ने हो ?
मैले ल्याएर हिट भएको होईन । मैले प्ल्याटफर्म मात्र दिएको हुँ । उहाँहरु जस्तो राम्रो कलाकार ल्याउन पाउँदा मलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ । प्रतिभाहरु कतै थन्किएर नबसोस भनेर मैले नयाँ कलाकारहरु ल्याएको हुँ ।
तपाईका चलचित्रमा, लोक फ्लेभरका गीतहरु बढी समावेश हुन्छन् , किन ?
मौलिक हो नी त लोकगीत । मादल बजेको सुन्दै नाच्न मन लाग्छ । मलाई लोकगीत धेरै मन पर्छ । लोकगीतले असाध्यै तान्छ । त्यसैले म यस्ता गीत राख्छु ।
तपाई सँधै महिलाका बिषयमा चलचित्र बनाउनुहुन्छ, यसपालीको चलचित्रमा फरक बिषय छ ?
रेखा थापाले सँधै महिला प्रधान चलचित्र निर्माण गर्छे भन्ने आरोप लागेको छ । त्यो राम्रो पक्ष पनि हो । मैले चलचित्र क्षेत्रमा आउँदा भएको बिभेद महशुस गरेर मैले त्यही चिजलाई चिर्दै आएको हुँ । मैले रामप्यारीमा पुरुष पात्रको वकालत गरेको छु । पुरुष पात्रहरु पनि पीडित हुन्छन् । श्रीमती पीडित पुरुष पनि छन् । सबै पुरुष खराब छैनन् । एकजना हजुरवुवाले नानीतिको बलात्कार गरेको कारण सबै पुरुषलाई त्यही गलत नजरले हेर्न भएन नी । मैले रामप्यारीमा, श्रीमती पीडित पुरुषको कथा पनि उठाएको छु ।
ट्याम्पु चालक छ तपाईको भुमीका, त्यसअघि ट्याम्पु चढ्नुभएको थियो ?
पहिला मैले ट्याम्पु चढेको थिएन । सुटिङका बेला चैँ बेस्सरी चढेँ । पहिले ट्याम्पु चढेको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो । अहिले चैँ मलाई मेरो साधन बिग्रिएको बेला ट्याम्पु चढ्न कुनै गाह्रो लाग्दैन । मलाई ट्याप्पु चलाउँदा, एकदम गर्व महशुस भयो । स्ट्ेरिङ चैँ साह्रो हुने रहेछ । नत्र गाह्रो भएन ।
दर्शकलाई सन्देश ?
तपाईहरुकै कुरा उठाएको छु । टेम्पु चलायो भन्दैमा नहेपौँ । हेप्ने व्यक्तिहरुका लागि ठूलो थप्पड हुनेछ यो चलचित्र । पेशा माथिको बिभेद २०७३ सालदेखि नै अन्त्य होस् । एउटा चालकलाई गर्ने ब्यवहार, एउटा पाईलटलाई गर्ने व्यवहारमा फरक नहोस् । मजदुरको पसिनाले बनाएको हो यो चलचित्र । तपाईको आफ्नो कथा , आफ्ना व्यथा छ । चैत २६ मा गएर चलचित्र हेरिदिनुहोस् ।
झापाको दमकको औद्योगीक पार्कमा उद्योग स्थापनाको सम्झौता
बिधार्थीहरुको सहयोगार्थ होलि बिशेस कार्यक्रम
हट फोटोले मन तातो हुन्छ नि-शालु गौतम
२५ माघ २०७२, सोमबार १७:३५ February 8, 2016 wwwmophasal
बादलले ल्याए “जति रुवाएनी तिमीले मलाई”
५ जेष्ठ २०७३, बुधबार १५:४८ May 18, 2016 wwwmophasal
डान्सर दिया कुवर संगको अन्तरबार्ता
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार १३:१९ October 6, 2017 wwwmophasal